China fekitori rusarura kugadzirwa ... Zhenyuan
Unyanzvi maficha uye hunyanzvi: SKHZ-B nc H-danda gungano muchina
1. Iyo nzira yekugadzira yekusimbisa H-danda kuisa h-danda zvinoenderana ne "Basa" chimiro uye weld maviri emakona majoini pamativi ese maviri panguva imwe chete, izvo zvinowedzera zvakanyanya hunyanzvi hwekuita. ari chaizvo haana akaremara pashure nomoto.
2. Orthotic michina H-yakaumbwa simbi flange yakatwasanuka muchina inogona kururamisa Angle deformation yeinopisa H-yakaumbwa simbi bapiro ndiro mushure mekusimbisa nenzira ye eccentric yekudhinda roller, iyo inoderedza simba rekutwasanudza uye inovandudza iyo yakatwasanuka chaiyo.
3. Kubva pakuona kwekutsvagisa maratidziro, iwo maratidziro ekusimbisa H-danda ndiwo akakurisa muChina, uye zviratidziro zveh-danda rekutsvaira gadzira mutsetse weiyo yepamusoro-soro h-danda rekugadzira michina yekugadzira kambani (ESAB Kambani) kunze kwenyika ndiyo zvakafanana.
4. Mumugwagwa wekusangana nekumiswa, kubatanidzwa kwegungano nekumisikidzwa kunogamuchirwa, izvo zvinoderedza mashandiro ekuita uye inovandudza kugona kwekugadzira.
5. Mune iyo centering modhi yewebhu uye flange ndiro, maviri seti ecentering maitiro epamberi neshure anotorwa kunatsiridza kumisikidza kurongeka.
6. Wire feeder yakapfava yakabatana neyekutetepa pfuti uye yekumonera Angle yemoto pfuti inogona kugadziridzwa.
7. Huru fillet weld, ichishandisa simba rakapetwa (DC + AC) waya mbiri, mbiri arc, yakapetwa kaviri dziva rekuwisira maitiro.Izvi maficha eiyi yekugadzira tambo ndeye yekutanga yerudzi rwayo muChina.
8. Kunze kwekutonga kwe PLC, kwakavimbika, kuri nyore kuronga.
9. Muchiteshi chimwe chete, kuenderera kupedzisa h-danda mune yekugadzira nzira yekumisa, kutungidza, orthopedics, kusimudza, kuburitsa uye mamwe maitiro.
Khj-c yakatwasuka flange corrector
Skhj-c yakatwasuka flange calibrator inoshandiswa kune flange calibration yeH-danda simbi. Mushure mekunge H-danda rapedza iyo yekutenderera nzira, iyo bapiro ndiro ye h-danda ichave yakaremara pasi pekuita kwekunyorera kunyorera, uye inofanira kugadziriswa pamberi payo Chishandiso ichi chinonyanya kushandiswa kwepapiro ndiro kururamisa h-danda uye T-danda mushure mekusimbisa.
Mimwe michina inotevera:
Kudzora kucheka muchina / mizhinji-musoro yakatwasuka bhaa yekucheka muchina, CGL-4000 / CHIKAMU simbi yekucheka muchina, KT-462 / semi-otomatiki yekucheka muchina, CG2-150B / kopi yekucheka muchina, KG-30 / CNC matatu Bai epamusorosoro kuchera muchina / TOUR muchina, 7-3040 * 16 / Magnetic vhiri nokuveza muchina, SAG- / lathe, CA6140 / kuchera uye azvikuya muchina, ZX-32 / batanidza rinofinha muchina, T4240 / Inopindirana mutsetse wekucheka muchina, BH6070 / Vertical muchina, Ya32-31 / yakatwasanudza muchina, DC-315 / ndiro yekuveura muchinaJz016-250 / kupera yekugaya muchina TXSOB / GD-20 / Magnetic emagetsi ekuboora RD-32A / DC welder AX5-50 / AC welder BXI-500 / C02 welder YM-500KR / yakanyudzwa arc Welding muchina NZA-1000 / electrode kuomesa bhokisi HY704-4
- 50 / inoyerera ovhoni hovhoni HI / 4 l - 20 yemagetsi mweya compressor / dhiziri jenareta, 200 kw / sandblasting muchina PBS - 100 r / pendi yekupuriza muchina GPQ9C / forogo rori b / rora CDWllHNC CPQ - 1-50 * 2500 / welding roller furemu HGZ - 5 a / flange yakatwasanuka muchina YTJ 50 / ultrasonic chakashata detector ECHOPE220 / dijitari tembiricha mita RKCDP - 500 / pendi firimu ukobvu gauge 345 fb '- MK Ⅱ / dijitari clip-pane ammeter 2003 / tembiricha uye humidity mita WHM5 / weld kuongorora mutongiSK / magnetic particle flaw detector DA-400S / vernier caliper.
CNC kucheka kweasina kugadzirwa zvinhu → gungano rezvigadzirwa
Pashure: Rack Sisitimu
Zvadaro: Ratidziro kuratidza kwekambani zvigadzirwa
Fekitori Nzvimbo Kuvaka
Kugadzirwa kwekambani uye kuvaka sumo